DHIRTA DIYARIGA AH: WAA MAXAY, TUSAALE, LIISKA - SOOSAARKA DALAGGA
Waa maxay dhirta waxaa lagu magacaabaa dioecious
Dhammaan dhirta ka socota qeybta Indo-abuurka (ubax) waxay u qaybsan yihiin kooxo waxana ay la xiriiri karaan dioecious ama shay-baarka. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa faraqa u dhexeeya dhirta dioecious iyo monoecious, waxa diyoeciousness iyo dhirta ay ka tirsan yihiin kooxda diyecia.
Waa maxay dioeciousness
Kooxaha dioecious waxaa ka mid ah nuqullo ay ku dhajiyeen gabar dumar ama lab ah, taas oo ah, pistils iyo stamens iskuma wada noqon karaan ubax isku mid ah iyo xitaa isku-dhafka. Marka la eego muuqaalkan, suurtagalnimada is-iskutallaabin buuxda ayaa laga reebay. Geedaha waxaa lagu wareejin karaa xenogamy - iskutaloosha-iskutalaabinta, taas oo ay sabab u tahay maadada ka mid ah shaybaarka loo wareejiyo dhaleeceynta geedka kale.
Sidaa darteed, pollination ee ubax waa suurtogal keliya haddii shinni iyo cayayaanka kale ee isticmaala manka dhirta geedi socodka habka pollination. Dhibaatada iskutallaabin-pollination waa xaqiiqda ah in kala bar of ubax ma soo saaraan abuur.
Waa muhiim! Saynisyahanada qaarkood ayaa ku fekeraya in ay u maleynayaan in ay macquul tahay maaha oo kaliya maadada angiosperm, laakiin sidoo kale kuwa aan ubaxin, kuwaas oo ay ku dhalatay xubno unugyo dhalmo iyo dumar ah, waxaa loo kala qaybin karaa jinsiga dhirta waxaana loo aanaynayaa kuwa diyoodhiga ah ama kuwa kali ah. Sidaa darteed, kooxahan waxaa inta badan ka mid ah dhirta aan uumi karin ubax.
Waa maxay farqiga u dhexeeya dhirta monoecious iyo geedaha dioecious?
Dhirta ciribtirka ah waxaa lagu gartaa jiritaanka ubaxyo heterosexual on hal shay, halka ubaxyo dioecious leeyihiin hal jinsi kaliya on warshad hal. Cunto-qabayaasha waxaa badanaa lagu wareejiyaa caawimada dabaysha, taas oo ah, saameynta hawada, maaddooyinka laga helo ubax waxaa loo wareejiyaa mid kale, dhirta diyariga ah waxaa lagu rusheeyaa oo keliya haddii manka laga qaado ilmo lab iyo dheddig ah oo uur leh.
Dhirta dhirta ayaa lagu soo bandhigaa pistachio, macaan, aspen, actinidia, sorrel dhanaan, berde, jooniska, leexashada.
Dhirta ciribtirka ah waxaa ka muuqda walnuts, Echinocystis, hornbeam, quinoa, bjørk, naar, galley, juniper, bocor, qajaar.
Wakiilada Diyaaliga ah
Si loo helo fikrad ku saabsan geedaha dioecious, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo sharaxaad kooban oo ku saabsan qaar ka mid ah wakiilada kooxdan.
Actinidia waa caleenta lyana ah, taas oo tiradoodu tahay 75 nooc. Actinidia waxay ku badan tahay qaybta koonfur bari ee Aasiya iyo Himalayas. Waxay ka mid yihiin xayawaanka, canabkiinna, muuqaal ka mid ah taas oo ah jilicsanaanta caleemaha. Kelyaha dhirta kuwan oo dhan waa dhan ama qayb ahaan lagu qariyay cidhibmo caleenta, caleemaha ayaa si ba'an loo habeeyay, iyada oo gees la jeexay. Ubaxa wuxuu noqon karaa mid yar, qiyaastii 1 cm dhexroor ama dhexdhexaad ah illaa 3 cm.
Noocyada intooda badani waxay leeyihiin ur aan lahayn, ubax cad, mararka qaarkood waxaa ku jira burooyinkeeda leh jaalle ama dahabka. Midhaha geedka waxaa lagu matalaa berry qoyan, jaale-cagaaran ama midab leh midab leh. The actinidia ugu caansan waa runinidia delicacy, taas oo loo yaqaan dhammaan kiwi.
Baro sida loo kobciyo actinia beerta iyo waxyaabaha muhiimka ah ee ay leedahay.
Actinidia waxaa lagu beeray dhirta ornamental, oo inta badan loo isticmaalo dawo, iyo midhaha cunnada la cuni karo.
Dabeecadda, actinidia wuxuu ku koraa kaymo aan dhicin, halkaas oo la abuuro penumbra dabiiciga ah, Sidaa daraadeed, waa in la abuuro xaalado isku mid ah oo laga qaado guriyeynta. Inkasta oo xaqiiqda ah in actinidia si fiican u kora meelaha meelaha hadhaysan, waxaa fiican in ay ku beeri on dhinaca qoraxda, tan iyo fruiting waxay ku dhacdaa oo keliya iftiin ku filan. Actinidia waxay ku wanaagsantahay carrada leh qadar yar oo nitrogen ah iyo fosfooraska, uma dulqaadan karo carrada alkaline. Xulashada ugu wanaagsani waa xiniinyaha yaryar. Waa wax aan loo baahnayn in dhirta lagu beero ciidda dhoobada culus.
Waa muhiim! Haddii actinidia lagu beeray dhaqanka mira dhalida, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro dhirta haweenka iyo labka ah ee hal beerto - seddexda qaybood oo kasta oo ubaxyo dheddig ah waa inay ahaataa ugu yaraan 1 wakiil oo lab ah.
Velvet waxay leedahay geedo qallafsan, waxay gaartaa 20 illaa 30 m oo dherer ah, oo leh dhexroor ballaadhan oo qiyaastii ah 120 cm Taajka geedka ee kaymaha waa mid aad u sarreeya, beerashada kali waxaa lagu gartaa qaab muuqaal ah. Warshadu waxay leedahay jilif caaro leh, oo leh muuqaal qurxoon oo qurux badan, geedaha yar yarna waxay ku qulqulayaan dhoobo. Lakabka sare ee jilifku waxaa lagu gartaa qaab dhismeedka qallalan, waxaa ku yaal shukumo ka badan 5 cm oo weyn, lakabka gudaha ee jilifku wuxuu leeyahay midab jaalle ah, ur ah oo gaar ah. Caleenta waa cagaar qurxan oo midab leh, caleemaha waxaa loo qaabeeyay si bareer ah, qaabkuna wuxuu la mid yahay caleemaha ash, laakiin leh taarikooyin yar iyo dabeecad aan fiicnayn.
Ubaxku waa mid aad u yaryar, qallafsanaan ah, illaa 1 cm, waxay leeyihiin caleenta cagaaran, ubaxyada waxaa lagu uruuriyaa dhirta dhaadheer, ilaa dhererkeedu yahay ilaa 12 cm Daqiiqada miraha waxay ku dhacdaa xilliga dayrta, miraha guud, madow, quruxsan, aan ku habboonayn isticmaalka, oo lagu garto ur aan fiicnayn. Velvet waxaa laga heli karaa Manchuria, Territory Territory, Amur iyo Primorye, China, Korea, Taiwan, Sakhalin, Kuril Islands, Japan. Velvet waa warshad khafiif ah, maaddaama geedkan uu jiray waqti dheer ka hor inta aaney glaciation ah.
Ma taqaanaa? Dhirta ciriiriga ah waxaa ka mid ah wakiillo ka socda flora, kuwaas oo ku badanaa xilliyadii hore ee jiilaalka.
Velvet oo ah warshad qurxin ah ayaa aad ugu badan dalalka yurub iyo Waqooyiga Ameerika, oo caan ku ah beerashada Gobollada Aasiya iyo Caucasus. Velvet waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn, waa dhirta malab wanaagsan. Sidoo kale, jilifku badanaa waxaa loo isticmaalaa inuu helo dheeha jaalaha ah si loo dhajiyo noocyada kala duwan ee dharka. Lakabka waaweyn ee looxyada waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo dhejiyo dhalada, oo loo isticmaalo qalabka dhismaha ee loo yaqaan "floats", qalabka nolosha, naasnuujinta, fareylada. Cork ka timaada geedka ayaa si fudud u kala soocaya, iyada oo aan keenin waxyeello geedka laftiisa. Qoryaha velvet waxaa lagu gartaa midab qurux badan iyo qaab muuqaal ah, sidaa daraadeed waxaa loo isticmaalaa soo saarida alaabta guriga iyo walxaha ubaxyada.
Markaad dooratid meel leexasho ah waa in la tixgeliyaa in geedku uu muddo dheer noolaa, sidaas darteed xididdadiisa aan waxyeello u geysan dhismayaasha, geed ka fog dhismayaasha. Sidoo kale, haddii mustaqbalka aad qorsheyneyso in aad dhisto wax u dhow geed, isku day in aad u guurto intii suurto gal ah oo ka soo baxa lebbiska, si aanay u waxyeeleynin xididada iyo burburin geedka. Geedka waa in la siiyaa hooska, sidaa daraadeed waxay ka wanaagsan tahay beerashada beerta, carrada ku haboon beeritaanka waa dhoobo, oo aan ku habboonayn beerashada ciidda ciidda.
Sidoo kale akhri waxa ku habboon ee Amur velvet.
Riwaayad waa sannad, labadii sano ee ugu dambeeyay, waxay ku xiran tahay dhererkeedu yahay 80 cm. Iyadoo ku xiran da'da uur-jiifka, dhirta waxaa lagu gartaa kala duwanaanshaha muuqaalka. Waxyaabaha yaryar ayaa leh caleemo qoyan, iyagoo gaadhaya dherer 10 cm, wakhti ka dib, dhirta ayaa u muuqda mid la isku qurxiyo oo leh caleemo lanceolate. Buds ilaa 3 cm dhexroor waxaa lagu soo bandhigaa qaabka inflorescences waxayna ku yaalaan dusha sare ee asliga ah, mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay 5 dhirta, ubaxyada laga bilaabo guga dambe ilaa horraanta xilliga dayrta, ubaxu waa caddaan. Dramku wuxuu ku badan yahay wadamada yurub, galbeedka Aasiya iyo Waqooyiga Ameerika.
Drema waxaa mararka qaar loo isticmaalaa wax soo saarka nadaafadda, maadaama ay leedahay tiro badan oo saponiin ah, taas oo ah qaabka xallinta dhibaatada leh xanaaqa waxay samayn kartaa xumbo badan oo adkaysi leh. Drema waa warshad si aan fiicnayn u qabow, sidaas darteed, awood u leh inuu sii wado qaboobaha qaboobaha ah. Waqtiga xaadirka ah, dukaanku ma aha mid dhaqameed oo aan loo isticmaalin warshadaha.
Waa muhiim! Naqshadaynta ugu weyn ee lulmoodka ayaa la gaari karaa marka ay soo degaan dhulluxyo dhexdhexaad ah, wax yar oo ah acidic, warshad caadi ah waxay ku koreysaa carrada qallalan ee engegan.
Drama wuxuu ku koraa aagaga iftiin leh, laakiin wuxuu u dulqaadan karaa penumbra iftiinka, sidaas darteed waxaa fiican in ay ku beeri goobaha qoraxda. Warshadda uma baahna ciidda si gaar ah loo bacrin karo, si fiican u kora beerta caadiga ah ee beerta, xaaladda kaliya ee lagama maarmaanka u ah waa xajmiga ciidda.
Willow waa caleemaha dhirta geedaha, oo ay ku jiraan 550 nooc. Geeduhu waxay koraan ilaa 15 mitir dhererka, mararka qaarkood waxaa jira noocyo ilaa 40 mitir ah. Qeybaha waqooyiga ee sii kordhaya waa la foorjiray, berriga buuraha waxaa lagu helaa sida digaagga duurjoogta ah, oo leh dherer dherer ah ilaa dhowr mitimitir. Iyadoo ku xiran nooca safsafka, caleemuhu waxay noqon karaan qaro weyn, cufan, cagaar dhalaalaya, ama naadir ah, grayish-cagaaran ama ciirsan-caddaan. Caleemaha waxaa loo beeray si bilaash ah, lamina waxaa laga yaabaa in uu yahay mid ballaaran ama mid cidhiidhi ah oo dheer, oo leh geeso adag ama jilicsan, taarik dhalaalaya.
Muuqaal muuqaal ah oo noocyada qaar ka mid ah ayaa ah joogitaanka qaybo badan oo ballaaran, kuwaas oo badanaaba caleemaha dhaliya. Lafdhabarta afkoda, laamaha dhirta waa kuwo khafiif ah, dabacsan, u nugul jilicsanaanta, burooyinkuna waxay noqon karaan bunni madow, casaan-huruud ah. Ubax ee safsigu waa mid aad u yar, soo ururiyey inflorescences cufan, sidaas darteed way fududahay in la arko. Ka dib markii ubax, miraha muuqda - sanduuqyo leh miraha fluffy yar yar. Willow waa warshad caadi ah oo ku koraan qaybta dhexe ee Ruushka, Waqooyiga Ameerika, noocyada qaar ayaa ku kori kara kulaylaha.
Baro nuucyada sii kordhaya ee noocyada caanaha sida: caleenta, cagaarka, kubbadda, oohinta, riyaha, nuurada.
Willow waxaa loo isticmaalaa sida sheyga qurxinta, sidoo kale inta badan noocyada qaar ayaa lagu beeray si loo xoojiyo ciidda dabacsan oo ciid ah, tan iyo nidaamka xididka geedka waa mid aad u sareeya, aad u horumarsan, oo laamo badan leh. Wood waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka suxuunta iyo walxaha ubaxyada. Willow waa dhir qiimo leh, noocyada qaarkood ee jilifku waxay ku habboon yihiin maqaar madow. Qoryaha badanaa waxaa loo isticmaalaa sidii alaab lagu samaynayo alaab khafiif ah. Caleemaha cannow waxay caan ku yihiin dawooyinka dhaqanka sida qalabka daawada.
Willow si fiican u koraa on loam iyo carrada ciidda, ku beeraan geed at a aagga leh ciidda ugu qoyan-qoyan, ee aagga iftiin leh.
Sawir waa dhirta jilicsan, oo iska leh Ficus. Geedku wuxuu leeyahay jilif midab khafiif ah. Warshad waxaa lagu gartaa joogitaanka weyn, oo si kale loo beeray caleemo adag oo kala duwan ama caleemo adag. Caleemaha Sinuusku waxay leeyihiin caleemo dhalan oo ay ku jiraan inflorescences laba nooc - kaprifigi iyo berde. Kaprifigami waa ubax labka ah, waxay leeyihiin inflorescences yar, berde waa ubax dumar ah oo leh inflorescences waaweyn.
Sawirrada waxaa lagu ogeeynayaa osam-blastophagous, waxay poleniinka ka qaadaan geedaha labka ah ilaa gabadha. Miraha waxay ka muuqdaan geedka - berde, gudaha oo leh tiro farabadan, macaan iyo casiir leh. Iyadoo ku xiran noocyada kala duwan, midabka midhaha wuxuu noqon karaa huruud, buluug ama buluug madow, badanaa waxaa jira miraha huruud ah-cagaaran.
Waxaa laga yaabaa in aad xiiseyneyso inaad barato sida ay u koraan berde ee guriga iyo berrinka bannaan, iyo sidoo kale akhri waxa ku dhirta waxtarka leh.
Sawirada ayaa ku baahsan Badda Mediterranean, Transcaucasia, oo ku taal xeebta koonfureed ee Crimea, Central Asia. Badanaa geedkii berde ayaa loo beeray si ay u helaan goosashada berde, oo la cuno cusub, la qalajiyey iyo qasacadaysan, waxay yihiin nadiifin gooni ah, waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa samaynta macaanka iyo macmacaan kale oo macmacaan ah. Daawada dadweynaha, caleemaha caleenta waxaa loo isticmaalaa sida wax yaryar daawooyinka.
Geed dhigo aag meel fiican oo iftiin leh ee koonfurta ka mid ah qorshaha, si ay berde ah ayaa laga ilaaliyey dabaylaha xoog leh. Geedku wuxuu jecel yahay xarriijimaha iftiinka, oo leh neefsasho wanaagsan.
Waa muhiim! Sawirro ayaa sidoo kale lagu beeray sidii guri dabaq ah ee guriga, ma koraan weyn, laakiin awood u leh fruiting.
Kareemku waa warshad fawaakiheed oo qashinka ah. Waxaa lagu gartaa joogitaanka aasaaska qadiimka ah, oo ku wareegsan saldhigga, ka soo horjeeda caleen ka baxsan qaybta sare ee warshadda iyo tan xigta - qaybta hoose. Caleemaha waa qallafsan, leeyihiin 5-7 caleemo leh gees jugged, saldhiga of asliga ah caleemaha waa ka badan sare. Ubaxyada dhirta waxaa matalaya inflorescences qaab muuqaal ah oo adag, meel ay ka muuqato guntooda furfurnaanta muuqata, leh qaab shisheeye ama qaab dheer, qaab dhismeed siman ama dheelan, midab cagaaran ama midab madow. Warshadda waxaa si ballaaran loo qaybiyaa adduunka oo dhan, waxay ku kori kartaa labada aag iyo kulaylaha labadaba.
Markii hore, dhirta ayaa la koray si ay u hesho miraha iyo saliidda, iyo sidoo kale fiilooyinka loo adeegsaday nolol maalmeedka. Hemp ayaa sidoo kale loo isticmaalay ujeedooyin caafimaad, daawooyinka madadaalada ayaa lagu sameeyey iyada oo ku saleysan. Kareemku wuxuu noqon karaa mid wax ku ool ah si loo soo saaro xargaha, xadhkaha, cabsida, dharka, waraaqaha iyo caleenta, maadaama dhirta ay ka kooban tahay fiilooyin aad u xoogan.
Soo ogow waxa uu yahay farsamada farsamo iyo waxa laga sameeyay warshad.
Kareemku waxuu dalbanayaa ciidda iyo meesha koritaanka. Sidaa darteed, ka hor inta aan la soo saarin, waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro dhammaan xaaladaha lagama maarmaanka ah. Geedku wuxuu jecel yahay goobaha iftiinka leh ee qorraxda furan, ciidda waa in ay ku jirtaa nafaqooyin badan, oo ah qoyaan-qaadasho, maadaama aysan kiisku u dulqaadan karin abaarta.
Nettle waa geedo daaq badan, waxaa lagu gartaa joogitaanka xididada xooggan iyo laamo badan oo yaryar. Nettle wuxuu noqon karaa 30 cm ilaa 2 m oo sarre ah, waxaa jira timo badan oo gubanaya oo asliga ah iyo caleemo. Maadada waa cows, oo caleemaha ay ka soo horjeedaan. Qalabka lamina waxaa ku jira qaab shisheeye ah ama qalin leh, illaa 17 cm oo dheer, iyo illaa 8 cm ballaaran.
Cirbadaha waxaa lagu daboolayaa ilkaha waaweyn. On the nettle, dhirta ee inflorescences badanaa horumariyo, kaas oo ubaxyo badan oo cagaaran oo la beeray, meeshii ubaxa waqti ka dib, abuurka muuqan, oo matalaya qallalan, jilicsan oo jilicsan ama jilicsan. Ilaa 22,000 oo shinni ah ayaa la soo saari karaa qayb kasta. Waxaa laga helaa Yurub, Aasiya, Shiinaha, iyo Waqooyiga Ameerika.
Akhri boggaga ku saabsan bogsashada bogsashada iyo xakamaynta nettle, iyo baro sida loo isticmaalo maro sida dharka ugu sareeya.
Nettle waa geedka in badanaa la cuno, oo ku salaysan waa maraqyo, borscht, saladh. Waxaa loo adeegsadaa sida xoolaha daaqa. Daawada dadweynaha, caleemaha nettle waxaa loo isticmaalaa in lagu diyaariyo infusions iyo decoctions.
Dhibcaha Diyoobiga ah waxaa loola jeedaa dhirta cawska, Sidaa darteed, waxay ku kori kartaa ciidda, gaar ahaan dhirta waxaa laga helaa xayawaanka qani ku ah nitrogen. Warshadu waa mid fudud-jecel, laakiin sidoo kale si fiican u kori karaa hadhka qayb ahaan iyo hooska.
Laurus genus wuxuu loola jeedaa geedaha hooseeya ama xoortay. Laurel waa warshad caddayn ah oo dhererkiisu sarreeyo 15 m, oo leh caleemaha cagaarka leh iyo caleemaha qaawan. Taajka geedka waa cufan, qaabka huuriga ah. Caleemaha caleemaha ku jira waxaa lagu beeray gebi ahaanba, waxay leeyihiin cidhib adag, qaawan, fudud, waxay gaari kartaa dherer 20 cm, 4 cm ballaaran Caleemaha waxay leeyihiin caraf udgoon, waxay u egtahay qoryaha dhaadheer ama caleemaha caleenta ah ee lagu dhuftay saldhigga. Midabka caleenta waa cagaar madow oo ku taal qaybta sare ee caleemaha, dhinaca hoose - shido.
Ubax Laurel waxaa lagu soo ururiyey dalladaha duufaanka, waxay ku yaalaan dhamaadka laanta qaybo dhowr ah, ee xuubka caleenta. Ubaxyada waa kuwo yar yar, huruud ah, ugu dambeyntii waxay u rogaan midab buluug madow. Laurel wuxuu ku koraa Badda Mediterranean, Transcaucasia iyo Canary Islands.
Aqoonso shuruucda kororka sii koraya ee guriga, dibadda, ka soo abuurka, iyo sidoo kale sida loo dacaayado laamiyada iyo waxyaabaha ay leedahay.
Laurel waxaa loo isticmaalaa sida bahal, saliid asaasi ah oo loo adeegsado karinta ayaa laga diyaariyey caleemaha. Sidoo kale caleen caleen waa daawo cayriin ah oo loogu talagalay diyaarinta wakiilo daaweyn kala duwan.
Laurel wuxuu si fiican u dareemayaa aag caafimaad qaba, laakiin wuxuu u dulqaadan karaa penumbra iftiinka. Warshadu uma baahna ciidda waxayna u dulqaadataa abaarta caadiga ah. Waxaa lagu talinayaa in la beero Bacriminta organic iyo macdanta ee ciidda ka hor beerashada si ay dhirta u horumariso.
Cirridka buckthorn badda waxaa ka mid ah laba nooc. Geedaha waa geedo ama geedo laga bilaabo 10 cm illaa 6 mitir, marmarka qaarkood ilaa 15 m. Caleemaha waxaa loo beeray si aan caadi ahayn, halkii dheer oo cidhiidhi ah, midabka caleenta cagaaran, dusha sare ee saxanka ayaa lagu daboolay dhibco yar oo ciiro ah. Bloom buckthorn boodthorn ka hor inta caleemaha ubaxyada, ubaxa waa yar yar, aan qalloocin. Meeshii ubaxa waxay u muuqataa drupe, taas oo ka kooban wax laga yaabo, iyo xabsi. Цвет плодов имеет красный или оранжевый оттенок, на ветке они расположены очень густо. Растет облепиха в Европе, Азии, Монголии, Китае.
Плоды облепихи часто используются в качестве продукта питания, их едят сырыми, готовят напитки, масло из облепихи применяется в косметологии и медицине. Noocyada kala duwan ee buckthorn badda waa dhirta ornamental, waxaa la beeray si loo xoojiyo wadooyinka jidadka ama abuuro dariishado. Caleemaha geedka waxaa loo isticmaalaa sida qalabka cagaaran.
Raadi noocyada buckthorn ee caan ka ah, shuruucda beerashada, sida loo faafiyo buckthorn badda iyo goorta la ururiyo, astaamaha baaluga, iyo sidoo kale sida loo koro Shepherdia, waxa faa'iidooyinka iyo sida cabitaanka badda barkthorn waa faa'iido u ah jirka iyo sida loo sameeyo compact bacarro badda.
Goobta barketornka badda waa inay ahaataa mid wanaagsan, geedku kama baqayo qorraxdu si toos ah, waxay jeceshaa carrada dhexdhexaad ah, waxay u dulqaadataa Bacriminta si joogto ah waxayna uga jawaabtaa iyaga oo leh goosashada qani ku ah.
Mistletoe ayaa iska leh caleenta geedaha yar-yar, kuwaas oo soo baxa. Waxaa la go'aamiyaa on laamood ee dhirta, waqti ka dib wuxuu u koraa a geed cagaaran weyn. Wareegtada qoryaha ayaa gaara dhererkoodu waa 80 cm, dhirta ayaa ka soo horjeeda caleemaha, kuwaas oo ku lug leh sawirradu. Maaddooyinka biyaha iyo macdanaha mistletoe waxay ka helayaan dhirta oo ay degto.
Waxay kuduujisaa buro aad u yar, ilaa 3 mm dhexroor, cagaaran-jaalle ah midab, midab huruud ah ama midab casaan ah ayaa ka muuqata goobta ubaxa, waxaa ku jira berrito been ah, oo leh saxaro dhaadheer. Dabeecadda, waxaa jira ilaa 70 nooc oo sharoobo ah, kuwaas oo inta badan ku kobcaya subtropics iyo tropics ee qaarada Afrika, ee ku yaalla tropics Asia iyo waqooyiga Australia, ficil ahaan Yurub ahaan.
Ma taqaanaa? Mistletoe waxaa loo isticmaalay sida quruxda badan ee Christmas-ka ee England ilaa qaybta labaad ee qarnigii XIX, wakhtigaasi wuxuu Ingiriisku bilaabay inuu qurxiyo geedka kirismaska, oo noqday astaamaha Christmas.
Miraha mistletoe waa cunto loogu talagalay shimbiraha. Waxa kale oo ku haboon soo saarista xabagta. Daawo dhaqameed waxa ku jira cuntada laga soo qaado caleemaha yar yar ee dhirta, loo isticmaalo dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan.
Maadaama dhirta loo yaqaan "mistletoe" loo yaqaan "dhirta", ma aha mid si gaar ah u koray, tijaabadani waxay u ekaan kartaa midab, xayawaan, geed, boob iyo geedo midho leh.
Aspen ayaa iska leh noocyada dhirta dildilaaca ee caanaha Poplar. Geedka waxaa lagu gartaa jiritaanka kolonovidnogo, height - ilaa 35 m, dhexroorka - 1 m: Geedku si dhakhso ah ayuu u koraa, laakiin wuxuu u nugul yahay cudurada qoryaha, sidaa darteed mudada noloshu aanay ka badnayn 90 sano. Xididdadu waxay si deg deg ah hoos ugu dhacaan dhulka, si aad ah u koraya dhowr mitir. Geedka wuxuu leeyahay midab jilicsan oo midab leh oo cagaar ah ama midab cufan leh, dildilaaca leh da'da oo isbeddelaya midab madow.
Aspen wuxuu leeyahay qaab kale oo caleen ah, waxay u taagan yihiin taarikada wareegsan ama jilbaha, illaa 7 cm oo dherer ah, oo leh caarad fiiqan ama caato ah, caleen ayaa leh geeso gooyo. Ubaxyada waxaa lagu gartaa qiyaas yar, waxay ku urursan yihiin ubaxyada qanjidhada, waxay noqon karaan guduud ama cagaaran, illaa 15 cm dheer, ubaxu wuxuu dhacaa ka hor inta aan la jarin. Ka dib markii ubax, miro waxay sameeyaan sanduuq, miraha waxaa lagu daboolay hoos (budada budada), taas oo ay ku faafayaan tobanaan kiilomitir. Aspen waxaa laga heli karaa meel u dhow kaynta iyo tundra, waxay ku koreysaa kaynta iyo kaynta-kore. Waxaa jira geedka Europe, Kazakhstan, China, Mongolia, Korea.
Sidoo kale akhri waxyaabo ku saabsan sifooyinka daawooyinka ee aspen iyo jilifkiisa.
Aspen inta badan caan waa geed cagaaran, waxay degeen xayndaabyada, beeraha magaalada. Jirka cagaarka ah waxaa loo isticmaalaa dhogor madow, waa ilka jilicsan iyo jaalaha ah. Geedka waxaa iska leh dhirta malab wanaagsan. Qoryaha waxaa loo isticmaalaa dhismaha guryaha, qaabka santuuqa. Aspen ayaa sidoo kale loo isticmaalaa sida alaabta ceeriin ee daawada dhaqameed, jilif iyo caleemo ayaa loo arkaa inay yihiin daawo.
Aspen ayaa si fiican loogu beeray meelo iftiin leh, laakiin waxay u dulqaadan kartaa penumbra iftiinka, ma dalbanayaan ciidda, si fiican u kora on saboolka iyo nafaqo, carrada acidic iyo alkaline. Shuruudda kaliya ee ciidda - waa in aysan aheyn qallalan, bac, qoob ka ciyaar ama barafoobay. Aspen sidoo kale waa loo dulqaadan karaa dhulka hoostiisa, sidaas darteed waa in la tixgeliyaa marka la beero.
Asparagus waa caleemaha dhirta, oo leh qiyaastii 210 nooc. Wuxuu ku kori karaa qaabka cawska iyo cawska. Warshadu waxay leedahay rhizomes si fiican u horumarsan, si xoog leh jeexjeexan afkoda. On the afkeh waa laamo badan oo ciriirin-qaabeeya. Asparagus ayaa hoos udhacay, caleemo yaryar, oo ay ku jiraan malaay ama shaybaarka. Geedka dhoobada leh burooyinkeeda yaryar ee lagu soo ururiyey unugyada, qanjidhada ama jimicsiga.
Ubaxa wuxuu leeyahay 6 tufaax, kuwaas oo loogu talagalay laba wareeg. Meesha ubaxa, miro ayaa la aasaasay qaab berri ah, kaas oo ku jira hal ama dhowr miraha. Buundada ayaa ah mid casaan ah ama casaan leh. Asparagus waxaa laga heli karaa jawiga cimilada waqooyiga Ameerika, Yurub, Central Asia, Australia iyo New Zealand.
Ma taqaanaa? Asparagus waa aphrodisiac dabiici ah. Giriigyadii qadiimka ahaa, ayaa dhawaanahan waxay dharbaaxo ku dhufteen dhirtaas iyaga oo madaxooda u muuqday muuqaalka muuqaalka ah ee faraca, iyo xafladaha aroosyada Faransiiska ee miisaska cusub ee dhawaanahan jiray waxay ahaayeen kuwo had iyo jeer ah ugu yaraan seddex suxood oo leh dhar asparagus ah.
Asparagus waxaa badanaa loo isticmaalaa sida qudaar ah oo ganacsi ahaan lagu iibiyo. Caleemaha khaas ahaan qiimaha leh ee asparagus officinalis, oo koraayo wax ka badan 20 cm, waxay leeyihiin madax aan ciriiri lahayn, gobolkani waxa uu ugu faa'iido badan yahay isticmaalka aadanaha. Caleemaha noocan oo kale ah karkariyo, qasacadaysan, diyaariso saladh iyo maraqa. Caleemaha Asparagus waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daawada dhaqameed, iyo nuxurka laga heley dhirta waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka daawooyinka loo yaqaan 'homeopathic'.
Asparagus waa dalag dalag u baahan, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan in la doorto goob degaan oo aad u taxaddar badan, aagga waa in si fiican u iftiimaa, aan lahayn, si fiican loogu beeray dhinaca koonfureed ee goobta. Dhirta ayaa jecel in ay ku koraan on carradu ciid xoog leh oo hodan ku humus.
Waxaa ka mid ah qoysaska khudradda cagaaran ee digirta, digirta waxay ku kalsoon yihiin noocyada ugu horreeya ee aqoonsiga, sidaas awgeed waxaan kugula talinaynaa in aad ogaato kuwaas oo ah noocyada ugu fiican ee digirta asparagus, sida loo koro, inta laga helayo asparagus iyo digirta asparagus ee jirka, iyo sidoo kale wixii cunto ah ee beerto asparagus ee jiilaalka.
Poplar ayaa iska leh caleenta geedo firfircoon oo kordhay, oo leh 95 nooc. Geedku waa ilaa 50 mitir, marmarka qaarkood 60 m, oo leh dhexroor jireed oo ka badan 1 mitir, taajku wuxuu leeyahay qaab muuqaal ah. On jaakad-cawl ama jilif-cawl-guduud waxaa jira dildilaacyo badan. Poplar waxaa lagu gartaa nidaam xidid adag, oo ku yaalla dusha sare iyo mitir badan oo ka yimaada jiriga. Caleemaha caleemaha waxaa loo beeray si bilaash ah, taargooyadu waa qoyaan ama ballaaran oo oval, oo leh mesh mesh.
Ubaxu wuxuu bilaabmaa ka hor inta uusan ku naaxin, ubaxyo yaryar ayaa ku yaala bogagga dhirta ee ka soo baxa laanta. Goobta ubaxa foomamka sanduuq - miro leh miraha yaryar oo leh timo badan. Seeds waa darajo ama dhoobo, madow ama madow-madow. Poplar ayaa ku baahsan qaybta waqooyiga, oo ku yaala shiinaha ee Shiinaha, aagga cirifka, Maraykanka, Mexico, Bariga Afrika.
Waxaan kugula talineynaa inaad ogaato waxa ah cadaan cad, Huuri, iyo maxay tahay madadaalo madow.
Poplar waxaa lagu gartaa joogitaanka cad alwaax cad, taas oo si fiican u bixisa shaqaynta waxaana loo isticmaalaa sida wax soo saarka warshadaha. Goobaha duurka ee hooseeya waxaa loo isticmaalaa qalab dhisme. Burooyinkeeda dhirta waxay noqon kartaa meel laga helo dheeha jilicsan iyo qayb caleen ah oo ah dheeha jaalaha ah. Poplar waxaa loo beeray sidii geed geedo ah, oo loogu talagalay beeraha beeraha ee magaalooyinka, intaa waxaa dheer, geedka waa geedka malab wanaagsan.
Poplar ma dalbanayo carrada iyo koraan karo nooc kasta oo ciid ah, waxay jecel yihiin meelaha qorraxda. Waxay u dulqaadaneysaa qoyaanka iyo heerarka sare ee biyaha, laakiin waxay dalbanayaan hawo-qaadista hawada iyo qiimaha nafaqada ee ciidda, markaa, markaad dooranayso goob lagu beerayo, fiiro gaar ah u yeelo sifooyinkaan.
Pistachio waa caleemaha dhirta cadceedda ama geedaha, oo leh 20 nooc. Warshadu waxay leedahay nidaam xididdo qoyan, xididada ayaa ka baxsan taajkii 30 m iyo 15 m - qoto dheer. Geedka waxaa lagu gartaa joogitaanka lakabka qaro weyn oo ah cawl madow mugdi ah, oo leh dufan yar oo ku saabsan caleemaha yar yar. Caleemaha Pistachio waa caleen, leeyihiin gees adag, dhaldhalaalaan. Ubaxku waa yar yahay, soo ururiyey inflorescences ee huruud, casaan, midabka casaan madow, meeshii taas oo u muuqata midhaha of drupes, ku haboon yahay isticmaalka.
Geedka wuxuu ku koraa Afrika, Mediterranean, Asia iyo Central America.
Ma taqaanaa? Markii ugu horeysay, geedo pistachio waxaa loo geeyey Europe laga bilaabo Suuriya 1 tbsp. n e. Boqortooyada Roomaanka Vitellius, Talyaanigu waxay jecel yihiin walxaha si aad u badan oo pistachios ah ay bilaabeen in ay si firfircoon ugu daraan suxuunta kala duwan.
Sababtoo ah xaqiiqda ah in pistachio uu leeyahay qoryo cufan oo xoog leh, waxaa loo isticmaalaa qashinka, waxa kale oo uu soo saaraa haraagyo si loo soo saaro cayayaanka. Caleemaha waxaa ku jira waxyaabo badan oo loo isticmaalo wax lagu kariyo maqaarka. Cuntada ugu caansan ee geedka pistachio waa lowska pistachio, taas oo loo tixgelinayo alaabo qiimo leh oo faa'iido leh. Nutsku waa isku cunaan ama waxaa loo isticmaalaa inay diyaariyaan suxuuno kala duwan.
Faleenka waxaa lagu beeray karaa sierozem, carrada bunka. Warshadku waa mid fudud oo jecel, abaarta u adkaysta, wuxuu jecel yahay carrada leh wax badan oo calcium ah. Dhir si fiican uga samee ciidda bacda ah kuna ilaali astaamaha pH 7.
Ogow sida fawaakihadu ufudud u yihiin dadka iyo haddii ay noqon karaan waxyeello haddii cuno aan la kantarooli karin.
Spinach waa caleemaha dhirta cagaarka ah oo leh saddex nooc. Ma jiro hal sano jir ama laba sano jir, koraayo height ah 50 cm, waxay noqon kartaa qaawan, fudud ama jeexan. Caleemaha waxaa loo diyaariyaa laba-jajab, waxay leeyihiin oval, qaab u eg oo leh gees adag. Caleemaha waxay leeyihiin qaab dhismeed siman ama jajab ah, ubaxyo yaryar, oo lagu soo ururiyey ubaxyada shimbiraha ah ee huruudka ah ee huruudka jaalaha ah, halkaasoo midabkuna yahay muuqaalka miraha. Spinach ayaa ku kordhay Iran, Caucasus, Central Asia, Afgaanistaan ​​sida dalagga duurjoogta ah, laakiin sidoo kale waxaa lagu beeray meel kasta oo lagu beerayo qiyaasta warshadaha.
Spinach waa warshad qiimo leh oo la cuno oo loo isticmaalo cayriin, lagu daro saladh, la kariyey, la shiilay, la dubay. Waxaa loo isticmaalaa daawada dhaqameed, maadaama ay leedahay sifooyin daaweyn iyo ka qaybqaato daaweynta cudurrada qaarkood.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in laga akhriyo oo ku saabsan: sifooyinka faa'iido ee isbinaajka jirka, noocyo kala duwan, waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad ku barto oo ku saabsan sifooyinka ee sii kordhaya warshad this, sida ay u koraan isbinaajka daaqadda oo dhan wareegsan sanadka oo dhan iyo waxa diyaargarowga loo samayn karo laga bilaabo jiilaalka.
Spinach waxay dalbaneysaa goobta degitaanka, waxay jecel yihiin carrada bacrin ah, sidaa daraadeed, waxa fiican in laga beero goobta bogga ay ku jirto maaddada organic. Waxaa si wanaagsan u kora on loamy carradu, koraan karaa on bacaadka ah, laakiin leh xaalad ah waraabinta joogto ah.
Sorrel dhanaanku waa nooc ka mid ah warshadda cagaaran ee cirridka Sorrel. Warshadu waxay leedahay tuubo, xidid aad u gaaban oo xidhan, oo lagu garto joogitaanka stem taagan, waxay gaari kartaa dherer ahaan 1 mitir. Dhabarku waa lacag, saldhigana leh faro guduudan.
Caleemaha waxay ka soo baxaan xididka, waxayna yihiin dherer, petiolate, waxay leeyihiin salka hoose ee qaab-qaabeeya, gees adag oo ah xididka dhexe, saxanka u gaar ah dhererka 20 cm, caleemaha waxaa loo habeeyay si kale. Ubaxyada waxaa lagu beeray ubaxyo baraf ah, leh midab casaan ama midab guduudan. Meeshii ubaxa waxay u muuqanaysaa abuur saddex xagal ah, madow-bunni ah, siman, oo dhalaalaya. Warshadu waxay ku badan tahay waqooyiga Ameerika, Aasiya, Yurub, Galbeedka Australia.
Sorrel waxay leedahay tiro balaadhan oo bogsiinaysa, sidaa darteed waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido sida loo koro sorrel, ka badan sorrel faa'iido leh waa dhanaan iyo sida loo diyaariyo sorrel jiilaalka,
Sorrel dhanaan waxaa loo isticmaalaa sida cuntada wax soo saarka, sidaa daraadeed waxaa lagu beeray qaabka dhaqanka khudradda. Iyadoo ku saleysan sorrel diyaariyo maraq cagaaran, borsch, caleemaha waxaa loo isticmaalaa for Canning. Sorrel waxaa loo isticmaalaa daawada dhaqameed, caleemaha iyo casiirka waxay daaweyn karaan cuduro kala duwan.
Waxaa fiican inaad ku beeri sorrel meel wanaagsan oo iftiin leh, doorbidayaa hooska qayb ahaan. Sorrel ma dalbanayaan ciidda, laakiin waxay sidoo kale door bidaan ciidda bacaadka ah ama loamy ciidda, waxay si fiican u koraan carrada peat. Sorrel wuxuu jecel yahay in uu ku koro carrada hawada leh ee la gooyo oo leh dhulka hoose ee dhulka.
Sidaa daraadeed, dhirta diyariga ah waxay ku baahsan yihiin adduunka oo dhan, waxaana lagu tilmaami karaa caws, geedo, geedo, iyo geed canab ah oo kala duwan. Waxay gebi ahaanba ka duwan yihiin, laakiin waxay ku midoobeen hal shay - hal nuqul, gabdhaha iyo haweenka labka ah lama wadaagi karo. Muuqaal noocan oo kale ah waa in lagu xisaabtamaa marka la beero geedo gaar ah si loo hubiyo suurtogalnimada dhirta iyo abuuritaanka ugxan.